ဒီဇငျဘာ ၁, ၂၀၁၇ - ၁၁:၄၉ ညနေ News Code : 870399 Source : ABNA Link:
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အ.စ) ဇိုက်ဗင်ရ်ှရှဟာမ်ကို မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
يا زَيْدُ خَالِقُوا النَّاسَ‏ بِأَخْلَاقِهِمْ‏ صَلُّوا فِي‏ مَسَاجِدِهِمْ‏ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ‏ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ‏ وَ إِنِ‏ اسْتَطَعْتُمْ‏ أَنْ‏ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
အို ဇိုက် !
၁။ လူထုအကြား ၎င်းတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တအရ နေထိုင်ပါ။
၂။ ၎င်းတို့၏ မစ္စဂျစ်ဒ်များ (ဗလီများ) တွင် နမာဇ်ဝတ်ပြုပါ။
၃။၎င်းတို့၏ လူနာများကို သွားရောက်ကြည့် ရှုပါလေ။
၄။၎င်းတို့၏ မယသ် ကို လိုက်ပြီးပို့ဆောင်ပါလေ။
၅။ အကယ်၍ ရှေ့ဆောင်အေမာမ် (သို့) မိုအ်ဇင် အဖြစ် လုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင် လုပ်ပါလေ။
အကယ်၍ အသင်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ (အထက်ပါအတိုင်း ) ပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ပြောကြလိမ့်မည် ၊ဤလူဟာ ဂျအ်ဖရ်ရီ ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် ဂျအ်ဖရ် (အ.စ) အပေါ် ရဲဟ်မသ် ပြုတော်မူပါ။၎င်းအနေဖြင့် မိမိ၏ သာဝကတော်များအတွက် မည်မျှ ကောင်းသည့်သွန် သင်ဆုံးမ မှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ အသင်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ (အထက်ပါအတိုင်း ) မပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ပြောကြ လိမ့်မည် ၊ဤလူဟာ ဂျအ်ဖရ်ရီ ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် ဂျအ်ဖရ် (အ.စ) အပေါ် ပြစ်ဒဏ်ချ တော်မူပါ။ ၎င်းအနေဖြင့် မိမိ၏ သာဝကတော်များအတွက် မည်မျှ မကောင်းတဲ့သွန် သင်ဆုံးမ မှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။
Ref : شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص383؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج8، ص430.